Daladii Somalida Norway oo la soo gaba gabeeyay. | Anti-Tribalism
Xarunta maamul goboleedka Puntland ee magaalada Gaalkacyo oo xalay saqdii dhexe bambooyinka gacanta lagu weeraray →
Qado sharaf lagu soo gaba gabeenayay daladii Somalida Norway isla markaasna lagu sii sagootinayay Abdulkadir Sh. Ahmed Gargaduud ayaa lagu qabtay maqaayada Onkod ee loo yaqaan maqaayada Ismaaciil Dheere.
Qadada ayaa waxaa iskugu yimid xubno matalayay golaha guurtida oo ay ka mid ahaayeen:
Suldaan Bashiir Sheikh Mohamed Geele
Hassan Abshir Gaas oo ka mid ah aasaasayaasha dalada
Mohamed Ali Qood oo matalayay boqolaalkii ka soo qaybgalay aasaaska dalada
Abdulkadir Sheikh Ahmed Gargaduud oo ka mid ah saxiixayaasha idman
Mohamed Siyaad Abdi oo isna ka mid ah saxiixayaasha idman
Abdirahman Farah Ali (sanyare) oo ka mid ah golaha guurtida ee dalada.
Odayaasha la hadlay Intersom Media ayaa waxaa ka mid ahaa Suldaan Bashiir oo yiri:
“Umada Somaliyeed ee Norway waxaan ugu bishaaraynaynaa in daladii labada sano la soo daadihinayay ay maantay soo gaba gabowday. Ulajeedada daladuna waa in Shanta Soomaalyeed hal meel la iskugu keeno.”
Abdulkadir Gargaduud oo isna la hadlay Intersom Media ayaa waxuu yiri:
“Aad baan u faraxsnahay waayo umada Soomaaliyeed way midowday. Daladu waxay la shaqaynaysaa dawlada dhexe. Dawladana waa inay ogaataa inaysan kaligeed waxba qaban karin.”
Abdulkadir oo qurbajooga la hadlaya ayaa yiri:
“Qurba joogana waa inay u diyaar garoobaan siday uga qayb qaadan lahayeen dib udhiska Somaliya.”
Odayaasha kale oo la hadlay Intersom ayaa waxaa ka mid ahaa Abdirahman farah Sanyare oo yiri:
“Dalaldii somaliyeed ee Norway way hirgashay aqoonsigii dawladana way heshay. Somalida Norwayna waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan waayo far kaligeed fool ma dhaqdo.”
Mohamed Siyaad Abdi ayaa isna yiri:
“Soomaalida waxaan u sheegaynaa in midnimo oo kaliya wax lagu gaari karo. Dalada Soomaaliyeed way hirgashay Soomaalida kale een hada soo gelina waxaan ka rajaynaynaa inay ku soo biiraan.
Hassan Abdir Gaas ayaa isna Somalida hawada u soo mariyay waano isagoo yiri:“Daladu waa rajada Soomaalida midnimadeedii. Soomaaliduna waa inay isku tashtaan. Gobol, qabiil, reer, urur iyo koox midkoodna wax ma noqonayaan. Salkeeda ayaa taa la soo taabtay”
Mohamed Ali Qood ayaa isna ka hadlay sababta dalada loo aasaasay. Mohamed waxuu yiri:
“Daladu way hirgashay Juhdigeeduna waa inay danaha Somalida ka shaqayso, shanta soomaaliyeedna isku keento iyo waliba inay daladu la shaqayso dawlada federeraalka ah.”
Qood oo ayaa hadalkiisa ku daray: “Anagu hadaan nahay odoyaasha waxaan rabnaa sidaan Somilada mid qur ah uga dhigi lahaayn dhibaatadana uga saari lahayeen.”Ugu dambayntii waxaa tix gabay ah ka soo jeediyay xaflada Abdi rahman Komandoos.
Halkaan ka daawo video qaybtii 1aad
Halkaan ka daawo video qaybtii 2aad
Halkaan ka daawo Abdirahman Komandoos oo ka gabyay xaflada
Posted on December 4, 2011, in Anti-Tribalism. Bookmark the permalink.	Leave a comment.